गाउँको माया नपाएकी झुप्रीलाई मिल्यो लाखौँ दर्शकको साथ….[भिडियो सहित] – Khabar Silo
गाउँको माया नपाएकी झुप्रीलाई मिल्यो लाखौँ दर्शकको साथ….[भिडियो सहित]
Posted on February 13, 2020 Author admin Comment(0)
१ फाल्गुन २०७६, बिहीबारकाठमान्डौ ,आफ्नाेे बेग्लेै माैलिक पहिचान बाेकेर संगीतिक जगतमा उदाएकि झुप्रि भण्डारिकाे पहिलाे गित सम्झि रुनारुना सार्बजनिक भएकाे छ ।झुप्री भण्डारीको पहिलो गीत सम्झी रुना’रुना सार्वजनिक भएसँगै धेरै द’र्शकको मन चि’रिएको छ । झुप्रिले नेपालकाे पहिलाे रियालिटि साे द भाेइस अफ नेपालमा आफ्नै माैलिक गित गाउँदा धेरै दर्शककाे आँखा रसाएका थिए । आजसम्म आफ्नाे आँखाले उज्यालाे र अँध्याराेकाे महसुस गर्न नपाएकि झुप्रिले आफ्नाे जिन्दगीकाे कथाजस्तै गित गाउछिन ।
आँखा नदेखेकै कारणले उनले औपचरिक शिक्षाबाट समेत बन्चित हुनुपर्यो तर पनि उनले सुनेकाे भरमा टपक्कै लय टिपेर आफ्ना पिडालाइ गितमा ढाल्न खप्पिस रहेकि छिन् । आफुलाइ आफ्नाे जिन्दगीदेखि वाक्क लागेकाे र पटक्कै बाच्न मन नलागेकाे अभिव्यक्ति उनका गितमा पाइन्छ । उनका गितमा आमाले नमारेकाे खुव गुनासाे गरेकि छन् । उनका गितमा प्राय निरासावादि चिन्तन पाइन्छ ।आफ्नै जिन्दगीको वास्तविकतालाई गीतमा उतार्ने झुप्रीलाई काठमाण्डौसम्म ल्याएर संसारभर चिनाएका कमल संघर्षले ‘सम्झी रुना रुना’को गीत लेखनमा सघाएका छन् ।
गीतमा पाण्डव विष्टको लय रहेको छ भने एरेन्ज विनोद बजुरेलीले गरेका हुन् । गीत सडक मिडियाले बजारमा ल्याएको हो । गीतको भिडियो निर्देशन कमल संघर्ष र वरुण रिजालले गरेका छन् । झुप्रीकै घरमा कैद गरिएको भिडियोको दृश्यमा झुप्री सहित उनका बुवा आमालाई देख्न सकिनेछ । उनको गीत सुनेर आँसु भरेको कुरा व्यक्त गरेका छन् भने कतिपय दर्शकले उनलाई बधाई तथा शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन् । दृष्टिबिहीन झुप्रीलाई यतिबेला माया गर्नको लागि जनसागर उ’र्लिएको छ ।
विगत केही वर्षअघि देखि निकै नै नेपालीहरुबिच सामाजिक संजाल टिकटक निकै नै लोकप्रिय छ । यहांं सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छ । कति मानिसहरु यहाबाट निकै नै भाइरल बनेका छन । त्यस्तै कयौ म्युजिक भिडियोहरु पनि यहि टिकटकबाट नै भाइरल हुने गरेका छन । त्यस्तै अहिले पछिलो समयमामा धेरै मानिसहरु यहीँबाट सेलीब्रेटी समेत […]
काठमाडौं । चर्चित गायक डम्बर नेपाली नयाँ गीत ‘सुईटर फाटेको’ भिडियो प्रिमियर भएको छ । अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन विच भिडियो सार्वजनिक गरिएको घोषणा गरियो । गायक नेपालीकै स्वय शब्द संगीत रहेको गीतको भिडियो निर्देशन प्रविन भट्टले गरेका हुन् । भिडियोमा सम्झना रिमाल, विशाल घिमिरे, सोमु गुरुङ र जिना ब्रिजीले अभिनय गरेका छन् भने डम्बर नै […]
भरखरै विवाह गरेकी जेरीलाई लिएर इजरायल उडे कृष्ण कँडेल आखिर किन होला ? (भिडियो सहित)
धुमधामसँग विवाह हुँदै थियो, एक्कासि मण्डपमा प्रहरी आइपुग्दा झस्किए सबै